Tagnamaro-MCC: hodiovina ny Oniversite | NewsMada
Tagnamaro-MCC: hodiovina ny Oniversite
Toy ny isaky ny asabotsy fahatelo amin’ny volana, hanatanteraka “tagnamaro” ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina (MCC), androany. Nosafidiana amin’ity andiany ity ny eny Ambohitsaina, izay hita fa tsy ampy fikolokoloana. Araka ny fantatra, ho mafimafy ny asa satria hisy ny fandokoana ireo trano fianarana, hita ho efa mihavasoka. Eo koa ny fanadiovana sy ny fanalana ny lobolobo, izay manangona voalavo sy manaratsy endrika ity toeram-pampianarana ambony ity.
Entanina handray anjara amin’izany voalohany ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny amin’ny Oniversite sy ireo mpianatra eny. Raha tsiahivina, tetikasa fifanampiana, entina hamohazana indray ny fitiavan-tanindrazana ao amin’ny Malagasy, ny “tagnamaro”. Asa mivaingana sy azo tsapain-tanana ho tombontsoa iombonana ny atao.
Hetsika iray enti-manova ny toe-tsaina mba hahay handray andraikitra amin’ny fanarenana ny firenena sy mba hahay hanaja ny fananana iombonana ny “tagnamaro”. Entanina handray anjara amin’izany ny olom-pirenena rehetra, ny fikambanana, ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ireo masoivoho vahiny eto amintsika, sns.
Natomboka tamin’ny volana marsa ny “tagnamaro” ka, ankoatra ny eto an-dRenivohitra, manatanteraka izany koa ny any amin’ny faritra samihafa.